Dib-u-qeexidda Fikradda Geo-Engineering - Geofumadas
Oktoobar, 2019 Geospatial - GIS, Engineering, egeomates My
Waxaan ku noolnahay daqiiqad gaar ah isku-xirnaanta edbinta ee sannado badan loo kala qaybsanaa. Baadhitaan, Naqshad dhisme, sawir xariiq ah, qaabdhismeed dhismeed, qorsheyn, dhisme, suuqgeyn. Inaan tusaale ka soo bixiyo wixii dhaqan ahaan u socon jiray; toosan loogu talagalay mashaariicda fudud, jaan-goynta oo ay adag tahay in la xakameeyo iyadoo kuxiran cabirka mashaariicda.
Maanta, si la yaab leh, waxaan isku darsannay qulqulo udhaxeeya maaddooyinkan kuwaas oo, ka baxsan tiknoolajiyada maareynta xogta, la wadaago hababka. Noocan oo kale ah inay adag tahay in la aqoonsado halka ay hawsha midkood ku dhammaato kan kalena ka bilaabmo; halka bixinta macluumaadka ay ku egtahay, marka nooca moodeelku dhinto, goorta mashruuca la joojinayo.
Injineerinka cilmiga dhulka: waxaan u baahanahay eray cusub.
Haddii ay ahayd in la baabtiiso muuqaalka geedi socodkan, kaasoo ka yimaadda qabashada macluumaadka lagama maarmaanka u ah mashruuc ee deegaanka geospatial ilaa ku dhaqan gelinta ujeeddooyinka ujeeddadiisa loogu gogol xaarayay, waxaan ku dhiirigelineynaa inaan u yeerno Geo-injineernimada. In kasta oo ereygan lala xiriiriyay cilmiyada cilmiga dhulka ee gaarka u ah duruufaha kale, haddana dhab ahaan kuma jirno xilliyada la ixtiraamo heshiisyada; intaa ka sii badan haddii aan tixgelinno in geo-location-ku uu noqday qayb ka kooban dhammaan ganacsiyada, iyo in aragtida Heerarka BIM Waxay nagu qasbeysaa inaan ka fikirno in baaxadda Dhismaha, Injineerinka iyo Dhismaha (AEC) ay gaabin doonto haddii aan tixgelinno xadka tallaabada xigta ee ay qaadaneyso, ee ah Howlgalka. Ka fikirida baaxad ballaadhan waxay u baahan tahay tixgelinta saameynta hadda jirta ee dijitaalka howlaha, taas oo ka baxsan dhismaha kaabayaasha oo ku sii fidaya ganacsiyada aan had iyo jeer lahayn matalaad jireed, oo aan ku xirnayn oo keliya xiriirka hawlgalinta xogta isku xigxigta laakiin isku midka ah iyo isdhexgalka isdhexgalka ee howlaha.
Daabacaadan Joornaalka waxaan soo dhaweynay ereyga “Geo-Injineer”.
Baaxadda fikradda Geo-injineernimada.
Muddo dheer, mashaariicda waxaa lagu arkay heerarkooda kaladuwan sida dhexdhexaad dhexdhexaad ah naftooda. Maanta, waxaan ku noolnahay daqiiqad halka, dhinac ah, macluumaadku yahay lacagta sarrifka laga soo bilaabo qabashadeeda illaa heer qashin; Laakiin hawlgal hufan ayaa sidoo kale dhammaystiraya macnaha guud si loo beddelo xogtan helitaankeeda hanti awood u leh inay soo saarto waxtar badan iyo xilal wajihi baahida suuqa.
Waxaan markaa ka hadlaynaa silsiladda ka kooban dhacdooyinka ugu waaweyn ee qiimaha u kordhinaya ficilada bini-aadamka ee ku-meel-gaadhka ah ee macdanta, taas oo dhaafsiisan arrinta injineerada, waa arrin dadka ganacsatada ah.
Habka loo maro - Qaabka in -waqti hore- Waa beddelaynaa waxa aannu qabanno.
Haddii aan kahadalno howlaha, markaa waa inaan kahadalnaa silsiladda qiimaha, fududeynta iyadoo kuxiran adeegsadaha dhamaadka, hal abuurka iyo raadinta hufnaan si maalgashiyadu usameeyaan.
Hawlaha ku saleysan Maareynta Macluumaadka. Inta badan dadaalkii ugu horreeyay ee 90-meeyadii, oo ay la timid soo-saaridda kombuyuutarka, waxay ahayd in si wanaagsan loo xakameeyo macluumaadka. Dhinaca kale, waxay dooneysay inay yareyso adeegsiga qaababka jireed iyo ku-daba-galka faa'iidooyinka xisaabinta xisaabinta adag; Sidaa awgeed, CAD bilowga daruuri kama aha inuu beddelo hababka laakiin wuxuu u horseedaa xakamaynta dijitaalka; sii wad inaad sameyso ku dhowaad isku mid, oo ay ku jiraan macluumaad isku mid ah, adigoo ka faa'iideysanaya in hadda warbaahinta dib loo isticmaali karo. Amarka xad-dhaafka ahi wuxuu beddelayaa xeerka is-barbar socda, kahortagga sagxadda 3 darajo, wareegga wareegga, jarista shaxanka saxda ah ee tirtirka iyo sidaas si isdaba-joog ah ayaan u sameynay boodboodkaas oo si daacadnimo ah u fududayn ama yareynin, kaliya laga fekerayo Faa'iidada lakabka taas oo waqti kale muujinaysa baafinta qorshaha dhismaha si looga shaqeeyo qorshooyinka dhismaha ama tuubooyinka. Laakiin daqiiqaddu waxay timid markii CAD ay ujeeddadeedii ka dhiibatay laba dhinac; waxay ku noqotay daal gaar ahaan qaybaha iskutallaabta, wajiyada iyo soo-bandhigyada seddex-geesoodka ah; Tani waa sida qaabeynta 2D ay u timid ka hor intaanan ugu yeerin BIM, fududeeynta howlahan joogtada ah isla markaana wax badan ka beddelnay wixii aan ku sameynay XNUMXD CAD.
... dabcan, maamulka 3D ee waqtigiisu wuxuu ku dhammaaday isugeyn la taaban karo oo la gaarey iyadoo xoogaa loo dulqaatay ilaha xaddidan ee qalabka oo aan ahayn midabyo soojiidasho leh.
Bixiyeyaasha waaweyn ee softiweer ee warshadaha AEC waxay isku beddelayeen shaqadooda si waafaqsan heerarkan waaweyn, kuwaas oo ku saabsan awoodda qalabka iyo korsashada dadka isticmaala. Ilaa waqti ka yimid markii maaraynta macluumaadkaan aysan ku filneyn, ka baxsan qaababka dhoofinta, isku xirnaanta xogta macallinka iyo isdhexgalka tixraaca ee ay saameeyeen isbeddelka taariikhiga ah ee shaqada ee ku saleysan waaxyeynta
Taariikh yar. In kasta oo dhinaca injineernimada warshadaha raadinta waxtarka ay leedahay taariikh aad u tiro badan, qaadashada farsamada ee Maareynta Howlgalka ee AEC macnaha ayaa daahday kuna saleysan isku xirnaanta; muuqaalka in maanta ay adag tahay in la qiyaaso mooyee inaannaan kaqeybgaleyn daqiiqadahaas ahayn. Dadaallo badan ayaa ka yimid toddobaatameeyadii, waxay xoog ku helayaan sideetameeyadii imaatinka kombiyuutarka shakhsi ahaaneed, iyagoo awood u leh inay saaran yihiin miis kasta, waxay ku darsaneysaa naqshadda kombiyuutarka lagu caawinayo ee laga heli karo xog-ururin, sawirro caan ah, shabakadaha LAN-ka gudaha iyo suurtagalnimada dhexgal anshaxyada la xiriira. Halkan waxaa ku yaal xalal toosan oo loogu talagalay qaybo ka mid ah halxiraalaha sida sahaminta, qaabeynta qaabdhismeedka, qaabeynta qaabdhismeedka, qiyaasta miisaaniyadda, xakamaynta agabka, qorsheynta dhismaha; dhammaantood leh xaddidnaanta farsamada ee aan ku filnayn is-dhexgal hufan. Intaa waxaa sii dheer, heerarku waxay ahaayeen wax aan jirin, bixiyeyaasha xalka waxay la kulmeen qaabab kaydinta oo liidata iyo, dabcan, xoogaa iska caabin ah inay wax ka beddelaan warshadda sababtoo ah xaqiiqda ah in kharashyada korsashada ay adag tahay in lagu iibiyo xiriir u dhigma wax ku oolnimada iyo waxtarka kharashka.
Ka guuritaanka marxaladan asaasiga ah ee wadaagga macluumaadka loo baahan yahay canaasiir cusub. Waxaa laga yaabaa in ugu weyn ee guusha la gaadhay ay ahayd biseylka internetka, taas oo, ka baxsan nasiinta suurtagalnimada in aan dirno emayl iyo daalacashada bogagga ma guurtada ah, albaabka u furay wada shaqeynta. Bulshooyinka la falgala xilligii websaydhka 2.0 ayaa ku riixay jaangooyooyin, si macno leh uga imanaya dadaallada ilo furan in hadda aysan u muuqan wax laga xumaado oo ay indho cusub ku arkeen warshadaha gaarka loo leeyahay. Anshaxa 'GIS' wuxuu ahaa mid ka mid ah tusaalooyinka ugu wanaagsan, kana soo horjeedda dhammaan khilaafaadka daqiiqado badan si looga adkaado software-ka lahaanshaha; deynta ilaa maanta aan la awoodin in lala socdo warshadaha CAD-BIM. Waxyaabaha ay ahayd inay dhacaan sababtoo ah culeyskooda wajiga qaangaarnimada fekerka shaki la’aanna isbeddelada suuqa ganacsiga B2B waxaa sii huriyay caalamiyeynta ku saleysan isku xirnaanta.
Shalay indhaha ayaan xidhnay oo maantana waan toosnay annagoo aragnayna in isbeddello horudhac ah sida juquraafi ahaan ay noqdeen isla markaana ay sabab u tahay in aan isbeddello lagu samaynaynin warshadaha digitalka, laakiin isbeddel lama huraan ah oo lagu sameeyo naqshadeynta iyo suuq-soo-saarka.
Nidaamyada ku saleysan Maareynta Hawlaha. Habka hanaanku wuxuu noo horseedaa inaan kala jabinno tusaalayaasha qeybta edbinta ee qaabka waaxda xafiisyada xafiisyada kala duwan. Kooxaha sahamintu waxay la yimaadeen awoodo soo bandhigid iyo dijitaalis ah, nashqadeeyayaashu waxay ka yimaadeen khaanadaha khadka fudud ilaa kuwa wax qaabeeya; nashqadeeyayaasha iyo injineerada ayaa u yimid inay xukumaan warshadaha geospatial-ka oo bixiyay macluumaad dheeri ah oo ay ugu mahadcelinayaan geo-location. Tani waxay bedeshay diirada laga keenay gudbinta yar ee faylalka macluumaadka ilaa geeddi-socodka halka walxaha moodeelku ay yihiin uun noodhadhka faylka lagu quudiyo inta udhaxeysa aaladaha sahaminta, injineernimada madaniga ah, dhismaha, injineernimada warshadaha, suuqgeynta iyo joomatikada.
Qaabaynta Ka fekerida moodooyinka ma ahayn wax fudud, laakiin way dhacday. Maanta ma adka in la fahmo in dhul, buundo, dhisme, warshad warshad ama tareen ay isku mid yihiin. Shay dhasha, kora, natiijooyin soo saara oo maalin uun dhiman doona.
BIM waa fikradda ugu wanaagsan muddada-dheer ee warshadaha Geo-injineernimada waligood soo mareen. Waxaa laga yaabaa in waxtarka ugu weyn ee ay u leedahay jaangooyooyinka isku dheelitirka u dhexeeya hal-abuurnimada aan la xakamayn karin ee waaxda gaarka loo leeyahay ee dhinaca tikniyoolajiyadda iyo baahida loo qabo xalka uu adeegsaduhu uga baahan yahay shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawladu inay bixiyaan adeegyo ka fiican ama ay ku soo saaraan natiijooyin wanaagsan oo leh ilaha ay bixiyaan warshadaha. Fikirka fikirka ee BIM, inkasta oo ay ku arkeen qaab xadidan dad badan codsigooda ku saabsan kaabayaasha jireed, dhab ahaantii wuxuu leeyahay baaxad weyn markaan ka fikirno xarumaha BIM ee uurka leh ee heerarka sare, halkaas oo isdhexgalka geedi socodka nolosha dhabta ah ay ku jiraan edbinta sida waxbarashada, maaliyadda, amniga, iyo kuwo kale.
Silsiladda Qiimaha - min macluumaadka illaa hawlgalka.
Maanta, xalalka ayaan diiradda saareynin ka jawaab celinta anshax gaar ah. Qalabka hal-mar ee howlaha sida tusaalayaasha dusha sare ama miisaaniyadda ayaa yareeyay rafcaanka haddii aan lagu dhex-geli karin webiga sare, socodka hoose, ama socodka is barbar socda. Tani waa sababta u dhaqaajisa shirkadaha hogaaminaya warshadaha si ay u bixiyaan xalal si guud u xalliya baahida baahideeda oo dhan, silsilad qiimo leh oo ay adag tahay in la kala qaybiyo.
Silsiladdani waxay ka kooban tahay wejiyadaha si tartiib tartiib ah u dhammaystiraya ujeeddooyinka is-af-garadka, jebinta isku-xigxigta iyo kobcinta isbarbar dhig ku habboon xagga waqtiga, kharashka iyo raad-raaca; waxyaabaha lama-huraanka ah ee moodooyinka tayada hadda jira.
Fikradda Geo-injineernimada waxay soo jeedineysaa isku xigxiga wejiyada, laga soo bilaabo fikradda qaabka ganacsiga illaa laga soo saaro natiijooyinka la filayo. Marxaladahaas kala duwan, mudnaanta maareynta macluumaadka si tartiib tartiib ah ayey u sii yaraaneysaa ilaa laga maareeyo hawlgalka; iyo illaa iyo inta hal-abuurnimadu ay hirgelineyso aalado cusub waxaa suurtagal ah in la fududeeyo tallaabooyinka aan qiimaha sii kordhin doonin. Tusaale ahaan:
Daabacaadda qorshayaasha waxay joogsataa inay muhiim tahay laga bilaabo waqtigaas oo lagu arki karo qalab wax ku ool ah, sida kiniin ama Hololens.
Aqoonsiga qorshooyinka dhulka la xiriira ee maareynta khariidadda dambe ma sii kordhinayaan qiimayaasha moodooyinka aan lagu soo daabici doonin heer ahaan, taasi waa mid is beddeli doonta oo u baahan qof magac leh oo aan lala xiriirin sifooyinka aan jirka aheyn sida magaalada / miyiga ama xaaladda dhul ahaaneed gobol maamul ah.
Qulqulkaan isku dhafan, waa marka adeegsaduhu cadeeyo qiimaha awood u leh inuu u adeegsado qalabkiisa sahaminta kaliya ma ahan inuu ku qabsado xogta duurka ku jirta, laakiin wuxuu tusaale u yahay ka hor inta uusan xafiiska gaarin, isagoo garowsanaya inay tahay wax fudud oo maalmo kadib uu heli doono oo la xiriira naqshad aad u baahan tahay inaad dib uga fikirto dhismaheeda. Goobta lagu keydiyo natiijada ka soo baxda waxay joogsataa ku darida qiimaha, illaa inta la heli karo markii loo baahdo iyo xakamaynta noocyadeeda; Marka, iskuduwaha 'xyz' ee lagu duubay berrinka ayaa ah hal shey oo daruur dhibic ah oo joojisay inay noqoto wax soo saar waxayna noqotay wax soo gal, talo gelin kale, alaab kama dambays ah oo si isa soo taraysa uga muuqata silsiladda. Taasi waa sababta qorshaha aan la daabicin khadadka dusha sare, maxaa yeelay wax qiimo ah kuma kordhin doono marka laga qiimeeyo badeecada si loogu daro qaabka mugga fikradda dhismaha, taas oo ah talo kale oo ah qaab dhismeedka, kaas oo yeelan doona qaab dhismeed, a qaabka korantada, qaabka dhismaha. Dhammaantood, sida nooc mataano dijitaal ah oo ku dhammaan doona moodeel hawleed dhismaha horay loo dhisay; waxa macmiilka iyo maal-gashadeyaashiisa ay markii hore ka filayeen fikrad ahaan.
Ku darsiga silsiladdu waxay ku jirtaa qiimaha lagu daray qaabka fikradeed ee bilowga ah, wejiyada kala duwan ee laga soo qaaday qabashada, tusaalaynta, qaabaynta, dhismaha iyo ugu dambayn maaraynta hantida ugu dambaysa. Wejiyada aan daruuriga aheyn, iyo halka warshadaha AEC (Dhismaha, injineernimada, dhismaha) ubaahan yihiin iskuxir udhaxeeya qaabeynta walxaha jirka ah sida dhulka ama kaabayaasha leh waxyaabo aan jirka aheyn; dadka, ganacsiyada, iyo isdiiwaangalinta maalinlaha ah, maamulka, xayeysiinta, iyo xiriirada wareejinta hantida dhabta ah.
Maareynta Macluumaadka + Maareynta Howlgalka. Dib-u-habeynta geedi socodka waa lama huraan.
Heerka qaan gaadhnimada iyo wadajirka udhaxeeya naqshadeynta macluumaadka macluumaadka (BIM) oo ay weheliso Soosaarka Maareynta Wax soosaarka (PLM), u kuurgal dhacdo cusub, oo loo habeeyay Afarta Kacaan ee Warshadaha (4IR).
Shuruudaha cusub ee isku-dhafka BIM + PLM.
Maanta waxaa jira waxqabadyo fara badan oo kicin kara shuruudo ay tahay inaan barto maalin kasta, natiijada ka dhalatay dhacdada BIM + PLM. Erayadaas waxaa ka mid ah Internetka Waxyaabaha (IoT), Smart Cities (Smart Cities), Digital Twins (Digital Twins), 5G, Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality (AR), oo la yiraahdo wax yar. Waxaa isweydiin mudan intee in le’eg oo walxahaas ka mid ah ayaa ku baaba'aya sida hadallo aan ku filnayn, iyagoo ka fakaraya aragti dhab ah oo ku saabsan waxa laga filan karo isla markaana dhinac iska dhigaya mowjadda ku meel gaarka ah ee filimada dambe-apocalyptic-ka oo waliba siinaya sawirro sida ay u fiicnaan karto ... iyo marka loo eego Hollywood, had iyo jeer waa musiibo.
Geo-injineernimada. Fikrad ku saleysan geeddi-socodka maaraynta xaaladaha durugsan ee dhuleed.
Infographic wuxuu soo bandhigayaa aragti caalami ah oo muuqaalka muuqaalka ah oo aan hadda lahayn waqti cayiman, taas oo ka muuqata aragtideena waxaan ugu yeeraynaa Geo-Engineering. Tan iyo kuwa kaleba waxaa loo adeegsaday hashtag ku meelgaar ah dhacdooyinka shirkadaha hormoodka ka ah warshadaha, laakiin sida hordhacayagu sheegayo, uma aysan yeelanin magac u qalma.
Infografigani wuxuu isku dayayaa inuu muujiyo wax aan si daacad ah u sahlaneyn in la qabto, tarjumaduna aad uga yar tahay. Haddii aan tixgelinno ahmiyadaha warshadaha kala duwan ee lagu wareejinayo wareegga oo dhan, in kasta oo leh qiimeyn kala duwan. Sidan oo kale, waxaan ku garan karnaa taas, in kasta oo qaabeynta ay tahay fikrad guud, waxaan tixgelin karnaa in qaadashadeeda ay soo martay taxanaha fikradaha soo socda:
Kobcinta Geospatial - CAD Massification - 3D Modeling - BIM Conceptualization - Dib u warshadeynta Mataanaha Digital - Integration Smart City.
Marka laga eego indhaha aragtida baaxadda, waxaan aragnaa rajada dadka adeegsada si tartiib tartiib ah ugu soo dhowaanayaan xaqiiqada, ugu yaraan ballamihii sida soo socota:
1D - Maamulka faylasha qaabab dhijitaal ah,
2D - Qaadashada naqshadaha dijitaalka ah ee beddelaya qorshaha daabacan,
3D - Qaabka saddex-geesoodka ah iyo goob-jogeleedkiisa joqoraafi ahaan,
4D - Nooca taariikhiga ah ee qaab waqti-habeysan leh,
5D - Galitaanka wajiga dhaqaale ee sicirka ka dhashay waxyaabaha xubnaha,
6D - Maareynta wareegga nolosha ee walxaha qaabeysan, oo lagu daro hawlgallada duruufaha nololeed ee waqtiga dhabta ah.
Shaki la'aan, fikradihii hore waxaa jira aragtiyo kala duwan, gaar ahaan sababta oo ah dalabidda qaabeynta ayaa isugeynaysa oo ma ahan mid gaar ah. Aragtida kor loo qaaday ayaa ah hal dariiqo oo kaliya oo lagu fasirayo aragtida dheefaha ay isticmaaleyaashu arkeen markii aan qaadanay horumarka farsamada ee warshadaha; noqo tan injineernimada madaniga ah, qaab dhismeedka, injineernimada warshadaha, Cadastre, sawir gacmeedka ... ama isku soo wada duub dhamaan howlahaan isku dhafan.
Ugu dambayntiina, infographic wuxuu muujinayaa tabarucaadka ay edbinimadu u soo hooyeen heerarka caadiga ah iyo qaadashada dhijitaalka ah ee hawl maalmeedka aadanaha.
GIS - CAD - BIM - Mataanaha Dijitaalka ah - Caadooyinka Smart
Si kastaba ha noqotee, ereyadan ayaa mudnaanta koowaad siiyay dadaallada hal-abuurnimada ee ay hoggaaminayaan dadka, shirkadaha, dawladaha iyo wixii ka sarreeya dhammaan aqoonyahannada taasoo horseeday waxa aan hadda ku aragno anshaxyo dhammaystiran oo qaan-gaar ah sida Nidaamka Macluumaadka Juqraafiyeed (GIS), tabarucaadka matalayay Naqshadeynta Kumbuyuutarka (CAD), oo hadda u xuubsiibanaysa BIM in kastoo, laba caqabadood ay ugu wacan tahay qaadashada jaangooyooyinka laakiin leh waddo si cad loo qeexay oo ah heerarka 5 ee qaan-gaadhnimada (Heerarka BIM).
Qaar ka mid ah isbeddellada ku dhaca muuqaalka 'Geo-injineernimada' ayaa hadda waxaa saaran cadaadis ah in la dejiyo fikradaha mataanaha Dijital ah iyo fikradaha magaalooyinka casriga ah; marka ugu horeysa ee firfircoon ee xawaareynta dijitaalka iyadoo la raacayo caqli galnimada qaadashada heerarka hawlgalka; tan labaadna waa mid ku habboon duruufaha ku habboon. Smart Cities waxay u fidisaa aragtida dhinacyo badan oo lagu dari karo aragti ah sida dhaqdhaqaaqa bini'aadamku u noqon karo macnaha deegaanka, maaraynta dhinacyada sida biyaha, tamarta, fayadhowrka, cuntada, dhaqdhaqaaqa, dhaqanka, wada noolaanshaha, kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhaqaalaha.
Saamaynta ay ku leeyihiin bixiyaasha xalka waa mid muhiim ah, marka laga hadlayo warshadaha AEC, softiweerka, qalabka iyo adeeg bixiyayaashu waa inay raacaan suuqa isticmaalaha oo filanaya wax ka badan khariidadaha rinjiyeysan iyo kuwa indhaha soo jiita. Dagaalku wuxuu ku dhow yahay geeska u dhexeeya kooxaha waaweyn sida Hexagon, Trimble oo leh moodooyin la mid ah suuqyada ay heleen sannadihii la soo dhaafay; AutoDesk + Esri oo raadinaya fure sixir ah oo isku dhafan qeybihiisa waaweyn ee isticmaala, Bentley oo leh qorshaheeda carqaladeynta oo ay ku jiraan isbahaysiyo is-kaashanaya oo ay la leeyihiin Siemens, Microsoft iyo Topcon.
Markan xeerarka ciyaarta ayaa ka duwan; Maaha xalka xalinta sahaminta, injineerada madaniga ah ama naqshadaha. Isticmaalayaasha maanta waxay filayaan xalal dhammaystiran, oo diiradda la saaray geeddi-socodka oo aan ahayn faylasha macluumaadka; oo leh xorriyad dheeri ah oo la-qabsashada shakhsi ahaaneed, oo leh barnaamijyo dib loo isticmaali karo inta lagu jiro socodka, la wadaagi karo oo ka sarreeya dhammaantood qaab isku mid ah oo taageeraya is-dhexgalka mashaariicda kala duwan.
Shaki la'aan waxaan ku noolahay daqiiqad weyn. Jiilka cusubi ma lahaan doonaan mudnaan inay arkaan dhalashada iyo xiritaanka meertada qaybtan ka mid ah Geo-injineernimada. Ma ogaan doontid sida xiisaha leh ee ay u socodsiisay AutoCAD 80-286 hal hawl ah, samirka sugitaanka lakabyada qorshaha dhismaha si ay u muuqdaan, iyadoo rajo beel ay tahay inaanan awoodin inaan fulino Lotus 123 oo aan ku haysannay waraaqaha qiimaha qaybta. shaashad madow iyo waraaqo liin dhanaan ah oo jajabinaya. Ma awoodi doonaan inay ogaadaan adrenaline-ka aragtida markii ugu horreysay khariidad cadastral ah oo lagu ugaarsado xayawaanka binary ee Microstation, oo ku socda Intergraph VAX. Xaqiiqdii, maya, ma yeeli doonaan.
Layaab la'aan badan waxay arki doonaan waxyaabo badan oo dheeri ah. Tijaabinta mid ka mid ah noocyadii ugu horreeyay ee Hololens ee Amsterdam dhowr sano ka hor, waxay ii keentay qayb ka mid ah dareenkaas markii ugu horreysay ee aan la kulmo aaladda CAD. Xaqiiqdii waan iska indhatirnaa baaxadda uu yeelan doono kacdoonkan afaraad ee warshadeed, kaas oo illaa iyo hadda aan aragno fikrado, hal-abuurnimo noo ah laakiin hordhac ah ka hor waxa ay tilmaamayso la qabsiga deegaan cusub oo awoodda wax-barashada ay aad uga qiimo badan tahay heerarka tacliinta iyo sannadaha waayo-aragnimo.
Waxa la hubo ayaa ah inay hore usocon doonto sidii aan filaynay.
Post Previous" Hore Majiraan meelo indhoole oo dheeri ah oo leh howlaha Mosaic
Post Next Wararka Geo-Engineering - Sannad Kaabayaasha - YII2019Next »